Singapore Education Services in Myanmar , Singapore Medical Services in Myanmar | CareForever Services ပင်မစာမျက်နှာ
ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှုBCA Academy
ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုSing Health
CareForever Services အကြောင်း CareForever Services သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စင်္ကာပူ BCA Academy သို့မြန်မာ ကျောင်းသား များကို အထူး ကောင်းမွန်သော မှန်ကန် တိကျသော ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ပို့ဆောင် ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများ အတွက် ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို Intake တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် ကျင်းပ ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံ SingHealth လက်အောက် ရှိ ဆေးရုံများ ၌ လူကြီးမင်းတို့ ၏ ကျန်းမာရေး အတွက် အကောင်းဆုံး နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှု ပြည့်ဝသော ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကို လက်လွှတ်မခံ လို သူများအတွက် SingHealth ၏ မြန်မာပြည် တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သော Careforever ကိုသာ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ CareForever မှ ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့CareForever မှ လူနာနှင့် မိသားစုဝင်များ အတွက် ထိရောက်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နှင့် စိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုတို့ ရရှိစေရန် စစ်မှန်သော စေတနာနှင့် မှန်ကန် တိကျမှုကို ရှေ့တန်း တင်ကာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက် ရှိပါသည်။
Contact Us Yangon Address : No.(177/179), 7B, 7th Floor, 34th Street (upper block ) , Kyauktada Township, Yangon. Tel :09-73113092 ,09-5166240 ,
Email : careforeverservices@gmail.com
ENQUIRY BCA ENQUIRY SingHealth ENQUIRY ဆက်သွယ်ရန် စုံစမ်းရန် . . .
CareForever ၏ ရုံးခွဲများ
Address	:	No- ( 177/179 ) , 7B , 7th floor , 34th street ( Upper Block ) , Kyauktada Township , Yangon
Office Phone :	09-73113092 , 09-5166240 Email	:	careforevermedical@gmail.com
Address	: Care Forever Services and Trading Pte Ltd No.1, Coleman Street # 06-04, The Adephi ,Singapore 179803
Tel	:	65-6726864 65-67260894
Email	:	careforevermedical@gmail.com
CareForever Services နှင့် ပွင့်လင်းစွာတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေ။ Contact Form Name / နာမည်:	Required Field *
Email Address (or) Phone :	Required Field *
မေးလိုသော အကြောင်းအရာ : Required Field *
BCA Academy SingHealth
Copyright © Care Forever Services . Developed By mmwebpro.com .